မင်းရဲ့ UNI ဘယ်ဂိမ်းအမျိုးအစား? - သတင်း
ရာသီခြောက်ပြီးဆုံးသွားပြီ၊ ကျွန်တော်တို့အများစုသည်အလွန်ကောင်းသည်ဟုခံစားနေကြရသည် ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတွင်ပုံသဏ္holeာန်ရှိသည်။
ဒါပေမယ့်အချိန်ကာလရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးပြသနာကိုတွေးတောဆင်ခြင်ဖို့ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းကသူ့ရဲ့ lore ကိုစေ့စေ့ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သောအစစ်အမှန်ကမ္ဘာကိုကျင့်သုံးခြင်းပဲ။
ဤရွေ့ကားသင်၏ uni Westeros ၌တည်လျှင်သင်၌ရှိချင်ပါတယ်အိမ်များဖြစ်ကြသည်။ မင်းရဲ့နဖူးစည်းစာတန်းကိုဂုဏ်ယူစွာပျံသန်းပါ။
မန်ချက်စတာ - အိမ် Stark
ဒါဟာ Sansa နှင့်သူမ၏ househead ကျစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်, Jon ရဲ့မကြာသေးမီကမွေးစားလူ Bun, Bran ရဲ့ရေနွေးအိုးသို့မဟုတ် Robb, ပဲကျန်ရစ်သူအဘို့အဘယ်သူသည်သင်တို့အဘို့အားလုံးဆောင်းရာသီကအေးမြမတိုင်မီလာမယ့်ခဲ့သည်ကိုသိသောသူအခြေခံအားဖြင့်ကိုယ့်စိတ်ဆင်းရဲ, မုတ်ဆိတ်မွေး hipsters ။
Man Met - အိမ် Karstark
သင်ရုံ shit မန်ချက်စတာပါပဲ။
လိဒ် - အိမ်ဘော်လ်တန်
၎င်းသည်ဆေးလုံးများသို့မဟုတ်သင် Laidlaw ၌နိုးနိုးကြားကြားရှိနေသည့်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခြားလူတိုင်းကိုထွက်ခွာသွားသည့်သင်၏ကျယ်ပြန့်သောမျက်မမြင်သွင်သွင်သွင်ပြင်နှင့် ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ရာရှိသည်။
သေချာတာပေါ့, သင် Exeter မဟာမိတ်များအဖြစ်ရေတွက်ခြင်းနှင့်မန်ချက်စတာကနေမြောက်ရှင်ဘုရင်၏ခေါင်းစဉ်ကိုခိုးယူအတွက်အောင်မြင်ခဲ့ကြပေမယ့်သိပ်မပျော်ရွှင်ကြဘူး - ကျနော်တို့လိဒ်ခွေးသွားပြီကြားဖူးတယ်။
လိဒ် Beckett က - အိမ် Umber
သင်ကလိဒ်ကိုသူတို့က cunts ဟုပြောခြင်းနှင့်အတူစိတ်ရှုပ်စရာမလိုပါ၊ သင်လမ်းပေါ်ရောက်သွားသူမည်သူမဆိုနှင့်လဲလျောင်းပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်စစ်မြေပြင် / Pryzm dancefloor အပေါ်တစ် ဦး Wildling နှင့်အတူချွတ်လည်ပင်းကိုဆိုလိုသည်ရင်တောင်။
ရှက်ဖီး - အိမ် Mormont
ရှီးဖီးလ်သည်မန်ချက်စတာနှင့်လိဒ်အမည်ရှိသောမြောက်ဘုရင်များ မှလွဲ၍ မည်သည့်ဘုရင်မျှမသိရှိပါ။
ထည် - House Cerwyn
ကျန်တဲ့ Yorkshire unis ကထိပ်ဆုံးဆယ်ယောက်ထဲကိုချီတက်သွားတယ်။ မင်းဖုန်းခေါ်လို့မရဘူး။
Kent - အိမ်ဂလိုဗာ
Deepwood Motte သည်အခြေခံအားဖြင့် Westeros ၏ South Thanet ဖြစ်သည်။ သင်သည်အပြင်လူကိုအလွန်အမင်းသံသယဝင်နေပြီးထိုစိတ်ပျက်စရာသံကျွန်းကျွန်းများမှထွက်ခွာရန်သင်ဘာမှမလုပ်ပါ။
Warwick - အိမ် Arryn
သင့်အားဆင်စွယ်ရဲတိုက်၏ထိပ် မှနေ၍ ကမ္ဘာ၏ကျန်အစိတ်အပိုင်းများကိုသင်သတိမထားမိဘဲနေသော်လည်းတိုက်ပွဲများ / လိဂ်စားပွဲများတွင်သင်ပါ ၀ င်သည့်အခါသင်အမှန်တကယ်ပျက်စီးခြင်းအချို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
Lancaster - အိမ် Frey
မန်ချက်စတာနှင့်လိဒ်တို့နှစ် ဦး စလုံးသည်သင်၏နိုးကြားမှု၌လဲလျောင်းနေသဖြင့်မည်သူသည်ယခုရယ်နေပြီနည်း။
UCLan - မျက်နှာမရှိသောအမျိုးသားများ
တစ် ဦး က uni အမည်မရှိပါ။ အနည်းဆုံးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အမည်မရှိပါ။
Exeter - အိမ် Lannister
အခြားဆံပင်ရွှေရောင်, ချမ်းသာကြွယ်ဝ, ခေါင်းစဉ် fucking Blonde, ချမ်းသာကြွယ်ဝ, ခေါင်းစဉ်ရိုးရာ။ သူတို့၏ကလေးများသည်ဆံပင်ရွှေရောင်တောက်ပ။ ချမ်းသာကြွယ်ဝသောရိုးရာလူမျိုးများဖြစ်လိမ့်မည်။
ကိန်းဘရစ် - အိမ် Tyrell
Mary Beard သည်ဆူးဘုရင်မဖြစ်သည်။ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ဘယ်လိုလျှောက်ရမယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့ကြင်နာတတ်သောအမျိုးသမီးများနှင့် Cindies တွင်သင့်ကိုလမ်းလျှောက်ပြီးသင်မည်သည့်ကောလိပ်တွင် ၀ င်သည်ကိုမေးမြန်းကြသည့် mop-haired twinks များနှင့်ကင်းသောကင်းဘရစ်ခ်ျသည်နှစ်ပေါင်းရာနှင့်ချီ။ ခိုင်မာစွာကြီးထွားလာခဲ့ပြီး၊ နည်းတူနေသမျှကာလပတ်လုံး၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်မြည်းကိုတက်။
အောက်စ်ဖို့ဒ် - House Targaryen
Slaver ရဲ့ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်းရှိစင်းကိုဖြတ်ပြီး Dragonflame Arzoo ရဲ့မှာ crewdate နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အချည်းနှီးဖြစ်၏, နှင့် Rhodes Must Fall ကျ Meereen ၏ဝိုင်းရံကဲ့သို့အကြောင်းကိုသိသိသာသာဖြစ်ခဲ့သည်။
သင်၏ဘိုးဘေးများသည်အရူးကိုလိုနီနယ်ချဲ့သမားများကိုလှောင်ပြောင်နေခဲ့ကြသော်လည်းသင်ကိုယ်တိုင်သည် ပို၍ လစ်ဘရယ်ချည်နှောင်ခြင်းကိုချိုးဖျက်သူတစ် ဦး အဖြစ်ရှုမြင်သည်။ လွတ်လပ်သောကမ္ဘာခေါင်းဆောင်သစ်များကိုဤနေရာတွင်ကြည့်ရှုပါ။
နယူးကာဆယ် - အိမ် Dayne
သငျသညျအချင်းလူသား, တက်ဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ သငျသညျနံနက်ဓား, Westeros အတွက်အကောင်းဆုံးတိုက်လေယာဉ်နှင့်ဗြိတိန်တွင်အကောင်းဆုံး unis ၏တ ဦး တည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခုတွင်သင်သည်မန်ချက်စတာနှင့်ဘရစ္စတိုလ်ကဲ့သို့သောပိုမိုကောင်းမွန်သောယူနီဖောင်းများ၏သမိုင်းဝင်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Bristol - အိမ် Baratheon
Baratheon ညီအစ်ကိုသုံးယောက်ရှိသကဲ့သို့ Bristol ကျောင်းသား၏ညအချိန်တွင်အဆင့်သုံးဆင့်ရှိသည်။
သင်သည် Renly ဇာတ်စင်တွင်စတင်ပါလိမ့်မည်။ တော်တော်အကောင်းမြင်ပြီးလိင်ကွဲပြားမှုရှိသည်။
ထို့နောက်ရောဘတ်စင်မြင့်ပေါ်ထွက်လာသည်။ ရွှင်လန်း၊ ချိုမြိန်ခြင်း၊ ဈေးပေါသောဝိုင်နှင့်ဟင်းချိုတို့ကိုမုတ်ဆိတ်မွေးထဲသို့ချပစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
မနက် ၅ နာရီမှာသင်ဟာ Stannis ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာပန်းကန်ပြားပျံကျောင်းသားတွေနဲ့အတူထိုင်ပြီးသင်မီးထဲ၌အရိပ်နတ်ဆိုးများကိုတွေ့နိုင်သည်ကိုနားထောင်သူမည်သူမဆိုအားပြောပြသည်။
UWE - အိမ် Hollard
အခြေခံအားဖြင့် Bristol ကအရက်မူးရုံပဲ။
Aberystwyth - အိမ် Tully
သငျသညျ Blackfish ကဲ့သို့ရိုင်းစိုင်းနှင့်ခေါင်းမာနေ, သင်ထောင်ထဲမှာနှစ်နှစ်အကြာ Edmure ကဲ့သို့မသန့်ရှင်းသောကြည့်ရှုပါ။ မင်းရဲ့ sigil လိုမျိုးပေါ့။
Loughborough - အိမ် Clegane
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Oberyn Martell ရဲ့ပေါက်ကွဲနေတဲ့ ဦး ခေါင်း၊
ကာဒစ်ဖ် - အိမ် Dondarrion
သငျသညျအတော်လေးအရေးကြီးသောဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သောသင်အားလုံးအချိန်စာသားအခြားလူတိုင်းအားဖြင့်ကျော် fucked ခံရရပ်တန့်မထားဘူး။
သင့်၏ Russell Group ၏ဂုဏ်သတင်း / Thoros of Myr ရှိသည့်အတွက်သင့်အားမသက်ဆိုင်သောအရာနှင့်သေခြင်း၏အေးစက်သောအချည်းနှီးမှသင့်ကိုပြန်ပို့ရန်ဘုရားသခင်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Durham - အိမ်စောစောစီးစီး
သင်တ ဦး တည်းနှင့်တွေ့ဆုံပြီးသင်ကောလိပ်တက်နေစဉ်သူတို့သည်ချစ်စရာကောင်းသည်ဟုသင်ထင်မြင်သည်။ ထိုအခါမူကား Durham မှသင်တို့၏ရည်းစားဟောင်းရည်းစားသည်သင့်အားနေအိမ်သို့ပြန်ခေါ်သွားသည်။
သူတို့ရဲ့အဖေကလူမျိုးရေးခွဲခြားတယ်၊ သူတို့ရဲ့သားကအောက်စ်ဘရစ်ခ်ျထဲမ ၀ င်နိုင်ဘူး၊ သူတို့အမေဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့သူဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူမစိတ်ထဲပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ၊ သူတို့အစ်မကစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာ၊ ဟန်ဆောင်တတ်ပြီးထူးဆန်းတဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေရှိတယ်။ အားလုံးမြို့ရိုးကိုကျော်အများကြီး။
Falmouth - အိမ်ဖလိုရင့်
York - House Slynt
Posh နှင့်ငန်, သင်အိမ်ခု၏အပြင်ဘက်၌ fit ပါဘူး။ သငျသညျအမှန်တကယ်မြောက်ပိုင်းနှင့်အတူ bickered လျှင်, ရွှေဝတ်ဆင်သင်ဖြစ်ကောင်းသင်၏ခေါင်းကိုဆုံးရှုံးချင်ပါတယ်။
ဆောက်သမ်တန် - အိမ် Bywater
ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham - House Selmy
ပျင်းစရာကောင်းပြီးယေဘုယျအားဖြင့်ချီးမွမ်းဖွယ်ကောင်းသည်။ သငျသညျရှည်လျားသောလွန်ခဲ့သောအချို့သောအကြီးအ Feat နှင့်အတူအိမ်ငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့်သူတို့ကတာရှည်မေ့လျော့ပါတယ်။
သူတို့သည်အဓိကကျသောအခန်းကဏ္ like မှပါ ၀ င်သည်ဟုခံစားရသော်လည်းငယ်ရွယ်သော၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအလားအလာရှိသောသူအားသင့်ကိုသူတို့လုံးဝမေ့သွားသည်
Nottingham Trent - အိမ် Trant
Trent, Trant - သူတို့ဟာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့မတူကွဲပြားမှုနှစ်ခုလုံးမှာအတူတူပဲ။ Ping Fereerers 'Corner ကိုစူးစမ်းလေ့လာနေသည်။
ဘာမင်ဂမ် - အိမ် Seaworth
သူတို့ဘာမင်ဂမ်ကိုသွားခဲ့တာဘယ်သူမှဝန်ခံချင်ကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်သူကမှသူတို့အိမ်ကိုအသစ်စက်စက် ၀ ယ်တာမခံချင်ကြဘူး။ တည်ထောင်သူကကြက်သွန်နီအနည်းငယ်ခိုးတင်ပြီးလက်ချောင်းထိပ်ဖျားကိုဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။
UEA - အိမ် Martell
UEA, Dorne ကဲ့သို့, ထူးခြားဆန်းပြားသည် - အဘယ်သူမျှမကအဘယ်မှာရှိသို့မဟုတ်ထိုအရပ်၌ဖြစ်ပျက်သောအရာကိုမသိသို့မဟုတ်ဂရုမစိုက်သောလမ်းအတွက်။
သေချာတာပေါ့၊ ယူအေအီးအိုင်ကရေဥယျာဉ်တွေမှာဘာမှမရှိဘူး။ LCR မှာသဲမြွေတွေသေသွားတာကိုမင်းမဖမ်းနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် UEA ဟာ Unbowed, Unbent, Unbroken ထက်မိုင်ပေါင်းများစွာပိုပြီးမှတ်မိလွယ်တယ်။
စိန့် Andrews က - အဆိုပါမာစတာ
သင်၏အဖေသည်ကျွန်ုပ်အဖေအတွက်အလုပ်လုပ်သည်၊ သင်လိုချင်လျှင်မင်းခေါင်းပေါ်တွင်ရှမ်ပိန်ကိုသွန်းလောင်းလိမ့်မည်။ သင်၏ဖျော်ဖြေရေးအတွက်တွင်းထဲသို့စစ်ဆင်ရန်မည်သည့်ကျူးကျော်သူကိုမဆိုလုပ်လိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏ဘ ၀ ၌ခက်ခဲသောနေ့တစ်နေ့ကိုသင်ဘယ်တော့မျှလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်။
သင်အကျိုးကျေးဇူးများကိုရိတ်သိမ်းကာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရောင်စုံဝတ်စုံများဖြင့်သင့်အိမ်ထောင်ဖက်များနှင့်အတူတွဲချိတ်နေစဉ်သင်သာသင့်အတွက်လူများကို ၀ ယ်ပါလိမ့်မည်။ မည်သည့်နိုင်ငံခြားသားမဆိုသည်သင်၏နေထိုင်မှုပုံစံနှင့်ကိုက်ညီရမည်၊ သို့မဟုတ်မျိုးသုဉ်းခြင်းနှင့်ရင်ဆိုင်ရမည်။
Edinburgh - Harpy ၏သားများ
သင်ရုံစိန့် Andrews က '' ခေါပါပဲ။
Glasgow - ဒီ Dothraki
အနည်းဆုံးရန်ပွဲသုံးခုမလုပ်ဘဲ Glasgow ၏ညသည်မှောင်မိုက်သောကိစ္စဖြစ်သည်။
လင်ကွန်း - ဆယ်သုံး
Qarth လိုပဲသင်ဟာမင်းရဲ့ရာဇပလ္လင်ကိုတောင်းဆိုနိုင်ပြီး Westeros / ဘယ်နေရာကိုမဆိုပိုကောင်းတဲ့ UCAS အချက်များဖြင့်မသွားနိုင်သောကြောင့်၊
ချက်ချင်းပဲနောင်တ? လူတိုင်းနည်းနည်းဖျားနာရှာဖွေနေ? ဟုတ်တယ်၊
ဘုရင့် - Braavos ၏သံဘဏ်
UCL - ယုံကြည်ခြင်းစစ်သွေးကြွ
၎င်းတို့သည်သာမန်လူများ၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကာကွယ်သည့်စစ်တပ်ဖြစ်သည် , High Sparrow ကပြောပါတယ် ထိုမင်းသည်သင်မှန်ရဲ့, ငှားလန်ဒန်ကျောင်းသားများအတွက်လွန်းသူကပြောတယ်မြင့်မားသည်နှင့်မြောက်လန်ဒန်နှင့် King ရဲ့ကမ်းတက်၏လူများအလုံအလောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။
ဒါဟာတကယ့်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ငါတို့တွေအားလုံး UCL ကျောင်းသားတွေသေဆုံးမှုအတွက်အရမ်းစိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ Bloomsbury အပြင်ဘက်ရှိတရားမမျှတမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး megapones များအော်ဟစ်နေကြသဖြင့်သင်သည်သူတို့၏နဖူးများပေါ်သို့ထွင်းထုလိုသည်မှာသာမန်ဖြစ်ကာ Loop သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိရန် ထိုက်တန်၏အစွန်းရောက်မှသူတို့ကို။
LSE - အိမ် Baelish
ဆိတ်ညံသော slimy နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ဆိတ်သားတစ် ဦး အားကစား - သင်၏ဆိုးညစ်ယုတ်မာတဲ့ဝဲ unplaceable ဖြစ်တယ်, သင်တစ် ဦး creepily အားနည်းလက်ဆွဲရရှိပါသည်။
သစ္စာရှိမှုအပေါ်မှာမင်းရဲ့စွမ်းအားနဲ့ငွေကိုအမြဲတမ်းရွေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် Goldman Sachs grad အစီအစဉ်ကိုဒုတိယတစ်ခေါက်မသုံးဘဲယူလိမ့်မယ်။
Imperial - အိမ် Payne
Imperial ကျောင်းသားအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ Podricks, inoffensive and studious နှင့် Ilyns, အမြဲတစေအသံတိတ်ဖြစ်နိုင်ခြေပုဆိန်လူသတ်သမားများ။
တော်ဝင် Holloway - အိမ် Tarth
သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိမြို့ကြီးများ၏ပြbyနာများနှင့်ထိတွေ့မှုမရှိသောသစ်ရွက်ထောင့်တွင် ထား၍ သင်သည်သင်၏ရတနာများ၊ နီလာများနှင့်အားကောင်းသောလွတ်လပ်သောအမျိုးသမီးများကြောင့်ကျော်ကြားသည်။
သငျသညျအရေးကြီးသောဖြစ်ခြင်းများအတွက်အရေးကြီးပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမ တကယ် ဘာကိုသိလဲ
QUB - အိမ် Greyjoy
ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းပြီးဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းပြီးတိုက်ပွဲတွင်ပြင်းထန်ပြီးလွတ်လပ်ရေးတောင်းဆိုမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဘဲလ်ဖတ်သည်အခြေခံအားဖြင့် Pyke ဖြစ်သည်။ သူတို့၏အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာဆားငန်ရေမဟုတ်ဘဲ Buckfast တွင်ရေနစ်သေဆုံးခြင်းဖြစ်သည်။
Sussex - နဖူးစည်းစာတမ်းမပါသောညီအစ်ကိုအသင်းအပင်း
ကျနော်တို့နဖူးစည်းစာတန်းမလိုအပ်ပါဘူး မင်းပြောတာက နဖူးစည်းစာတန်းများသည်ခေတ်ရေစီးကြောင်းဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ၊ ကျန်တဲ့လူတိုင်းမှာနဖူးစည်းစာတန်းတွေရှိတယ်၊ ခင်ဗျားတို့ကိုအဆုံးသတ်လိုက်တာကတော့ဟစ်пи cunts တွေလိုမျိုးပဲအဆုံးသတ်သွားတယ်။
Leicester - ထိုဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုတည်ဆောက်နေသူများ
UAL - The Night ရဲ့စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့
သင်စိတ်ဆင်းရဲရတယ် မင်းကအနက်ရောင်အများကြီးဝတ်တယ်။ သငျသညျကောင်းစွာအမိန့်ယူကြဘူး။
ရေချိုး - အိမ် Royce
Waymar Royce သည်လူအများစုအား Bath ကိုအလေးအနက်သဘောထားမထားသည့်အချိန်ထက် ပို၍ ယူသောပထမဇာတ်လမ်း၏အဖွင့်ခရက်ဒစ်သည်အထိမကြာပါ။
လီဗာပူးလ် - တောရိုင်း
ရာသီဥတုနှင့်မသင့်တော်သောအဝတ်ကိုသင်ဝတ်ဆင်သည် - ၎င်းသည်အေးခဲနေသောမြောက်ပိုင်းလမ်းများပေါ်တွင်နေရောင်ခြည်ပြည့်ဝသောခြေထောက်များနှင့်ပလက်ဖောင်းဒေါက်များလား၊
သငျသညျရိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖြစ်သင်တို့၏အခြားလူတိုင်းရဲ့စိတ်ကူးလုံးဝမတရားဖြစ်ပါတယ်ထင်, သင်သောက်ချင်, ဒါပေမယ့်ဟုတ်တယ်, သင်ကျိန်းသေမတိုင်မီရန်ပွဲများတွင်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုကိုက်ပါတယ်။
JMU - အဖြူရောင် Walkers
သငျသညျတစ်နည်းနည်းနဲ့ (သူတို့မြို့ရိုးကိုကျော်လွန်ပြီး topless များမှာ) ကို Wildlings ထက်ပင်လျော့နည်းအဝတ်ပင်ကိုဝတ်ဆင်, သင်နီးပါးတိုင်းလမ်းအတွက် Wildlings ထက်ပိုမိုဆိုးရွား - ဒါပေမယ့်လီဗာပူးလ် / မြောက်ဘက်အပြင်ဘက်ဘယ်သူမှဖြစ်နိုင်သမျှယုံကြည်သည်။
သို့သော်သင်နှင့်အတူတူပါပဲ - သင်သည်သင်၏အချိန်အများစုကိုသူတို့နှင့်အတူအိပ်နေရန်ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
The NUS - သစ်တော၏ကလေးများ
အရာရာအားလုံးပျက်စီးခြင်း မှလွဲ၍ သင်ဘာလုပ်သနည်း။ သငျသညျပလက်ဖောင်းမရှိ, လုံခြုံနေရာများနှင့်အဖြူ Walker ကဖန်တီး, ယခုအရာအားလုံး fucked ဖြစ်ပါတယ်။